Shiinaha Qashinka caaga pulverizer 75kw Motor Kit Soosaarka iyo Warshad | Xinrui
Acodsi Scenarios: Dib-u-warshadaynta caagagga, gaar ahaan qalabka dhismaha.
Waxyaabaha ugu muhiimsan: birta daawaha ah, birta aan birta ahayn, birta
Dibedda Loo Dhigo: 300KG-600KG / H
Ku habboon birta caagga ah, guddiga xargaha, alwaaxda deegaanka, khadka xagalka, silig gacmo adag oo caag ah, muuqaal, gidaar, tuubbo, XPS, shaxanka dhismaha, guddiga xumbada, SPC, dabaqa WPC, lebenka xajmiga
Codsiga1_Kaburka dheriga ayaa la jajabiyay oo la jajabiyay.
Codsiga2_ Tareenka kuraasta waa la jajabiyay oo la burburiyey.
Joogtada noqoshada golaha korantada
mashiinka martida loo yahay
quudiyaha birlabta magnetic 250W
Faaruqinta iyo ka-saarista birta
Hawada Afuufa-awoodda 7.5W
biibiile qaboojiye ah
Gaarista iyo qaboojinta
DIA 1200mm wareega shaashadda birqaya
off taageere 1.1KW
Boodhka garaaca wadnaha ama ka saarista shaandhada bacda
Boodhka iska saar
Labada Spind ee caaga wax lagu burburiyo waxaa si madaxbanaan u wada labo matoor si ay horay iyo gadaal isugu kala wareegaan. Mindiyaha guurguura ee dunnida ayaa midba midka kale qaniiniyo si uu u yeesho xiirid, caaradda mindida dhaqaaqaysa iyo dusha sare ee silsiladda gacmaha ee mindi la jeexjeexay, iyo kala-goynta iyo xawaaraha farqiga dunmiiqa jeexjeexa, si loo gaadho saamaynta burburka. Sababtoo ah wadajirka wadajirka ah ee mindiyo dhaqaaqa, shaqada quudinta otomaatiga ah ayaa lagu guuleysan karaa, iyo qaabdhismeedka mashiinka mashiinka ee gaarka ah wuxuu ka fogaan karaa ifafaalaha foorarsiga ama xannibaadda qalabka ee habka wax soo saarka ee xawaaraha hoose iyo xaddiga sare, si loo hagaajiyo wax soo saarka hufnaan.
1.General, balastar 12mm waxaa loo isticmaalaa isla ganacsiga. Laakiin dhumucda saxanka baffle ee mashiinkeena martida loo yahay waa 18mm.
Tuubooyinkeena qaboojinta waxay ka sameysan yihiin bir bir ah. Marka la barbardhigo wax soo saarka isla qiimaha, warshadaha kale waxay adeegsadaan birta halkii.
Farqiga u dhexeeya xirmada 55KW iyo xirmada 75KW
1. Isku-beddelka is-beddelka soo noqnoqda ee korantada 75KW wuxuu leeyahay difaac ka fiican mashiinka marka loo eego Star-delta kicinta golaha korantada ee xirmada 55KW.
2. Awoodda matoorka 75KW ayaa ka wax soo saar badan tan 55KW.
3. DIA 1200mm wareega shaashadda wareega ee xirmada 75KW, kana weyn shaashadda wareega 55KW, awood weyn.
75KW mitir gaari
2970 r / daqiiqo
Ku rakibo daqiiqado gudahood. Si fudud loo raaco tilmaamaha iyo tilmaamaha fiidiyowga.
Mashiinka, damaanad-qaadka golaha korantada muddo hal sano ah, qandaraaska martigeliyaha laba sano. (xirashada qaybo iyo hawl aan caadi ahayn oo cilladdu sababtay kuma koobna inta u baahan dammaanadda.)
Duubista filimka duudduuban
Hore: Balaastigga Balaastigga 55kw Qalabka Gawaarida
Xiga: PVC Pulverizer Qalabka 90KW Gawaarida